Umboniso weNtlanganiso yoNyaka weGolide!
I-Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co., Ltd inentlanganiso yonyaka kutshanje. Ngakumbi nangakumbi ulutsha oluyahlulahlula kweli qela, kwaye siyakholelwa ukuba iFontainebleau iya kuba lukhetho olufanelekileyo lwabantu ngakumbi. Ukuba unomdla, yiza ujoyine nathi!
Ipeyinti yomculi ineBrit eya e-UK
Umzi mveliso webrashi yepeyinti yegolide yegolide bezigqibile iiseti eziyi-10000 zeebrashi kunye nezi bhokisi zilungele inqanawa e-UK. Yenza ngokwezifiso uyilo lwebrashi yomthengi wethu, ukuba unesicelo se-OEM nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
Ungayithenga njani i-watercolor yebrashi yokupeyinta ngobuchule kwabaqalayo?
Abaqalayo bathenga njani i-watercolor yepeyinti yepeyinti? Oku kulandelayo zezinye iiparameter ezibalulekileyo endizishwankatheleyo xa uthenga ezi brashi. Okokuqala, imilo yebrashi Ngokubanzi, ibhrashi ejikelezayo isetyenziswa kakhulu. Uninzi lwazo lungahlulwahlulwa, ke andizukungena kwiinkcukacha apha ....
Iindidi zeebhrashi zokupeyinta ezenziwe ngobugcisa esihlala sizisebenzisa ekupeyinteni zezi zilandelayo: Uhlobo lokuqala yifayibha yendalo, eyi-bristles. Kubandakanya i-bristles, iinwele zengcuka, iinwele ze-mink njalo njalo. Udidi lwesibini yifayibha yemichiza. Sihlala sisebenzisa i-nylon. I-Bristles entsha yokupeyinta ibrashi ithengiwe ukwenza ...
Indlela yokwahlula ibrashi yokwenyani kunye nenkohliso?
Indlela yokutsha Khupha enye yeebristles kwibrashi uze uyitshise ngomlilo. Kukho ivumba elitshayo ngexesha lenkqubo yokutsha, kwaye lijika libe luthuthu emva kokutsha. Le yeyona bristles yokwenyani. Iintsimbi zomgunyathi azinancasa okanye zinuka ivumba leplastiki xa zitshile. Emva kokuba ...
Indlela yokwahlula phakathi kwebristle brashi kunye nenayiloni ibrashi?
Jonga icandelo lokuwela umnqamlezo wenayiloni uyakhazimla, kodwa ii-bristles azikho. Le ndlela inokwaziwa ngamehlo, kodwa umgangatho wenayiloni uthambile, kwaye icandelo lomnqamlezo lincinci, ngenxa yoko alikhange lahluke kwii-bristles zehagu. Ukujonga icandelo lomnqamlezo, le m ...